इसाई धर्म अपनाए को’रोना लाग्दैन भन्ने को’रोना सं’क्रमित पादरीलाई जे’ल स’जाय ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/इसाई धर्म अपनाए को’रोना लाग्दैन भन्ने को’रोना सं’क्रमित पादरीलाई जे’ल स’जाय !
बीबीसी। म्यान्मारमा को’रोना भा’इरससम्बन्धी नियम तो’डेको अभियोगमा एक पादरीलाई तीन महिना कै’द स’जाय सुनाइएको छ। डेभिड ला नाम गरेका क्यानेडियन पादरीलाई इसाई धर्म लिने मानिसलाई कोरोनाले केही गर्न सक्दैन भन्दै भ्र’म फैलाएको क’सुरमा अदालतले स’जाय ताेकेकाे हाे। उनी आफैं भने कोरोना सं’क्रमित हुन्।
बिहीबार म्यान्मारको एक अदालतले उनलाई कोरोनावि’रुद्ध लागू नियम उल्लंघन गरेकाे कसुरमा उनलाई ३ महिना कै’द स’जाय सुनाएको हो। ती पादरीले यन्गुनमा आयोजित इसाई धर्मावलम्बीको ठूलो सभामा सम्बोधन गरेका थिए। ४३ वर्षीय उनको जन्म म्यान्मारमै भएको हो। तर उनी क्यानडा गएका थिए।
उनले गत अप्रिलमा उक्त धार्मिक सभा आयोजना गरेको थिए, जतिबेला म्यान्मार सरकारले भि’ड गर्न पूरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। साेही सभाका कारण उनलाई र उनका २० समर्थकलाई कोरोना सं’क्रमण भएको थियाे। उनले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए, ‘यदि तपाईंको हृदयमा यशु ख्रिस्टले बास गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई कहिले कोरोना लाग्दैन।’ उनको यो भाषण सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो।
जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार म्यान्मारामा अहिलेसम्म ३५७ जनालाई कोरोना सं’क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ६ जनाको मृ’त्यु भएको छ। तस्बिर : ईपीएबाट
आज वि.सं.२०७७ साल कार्तिक १४ गते । शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस।